XOG saldhiga Turkiga ee Soomaliya oo Soo Jiitey 13 Quwadood Aduunka,Afrika oo Ka Qeylisay Quwadaha - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG saldhiga Turkiga ee Soomaliya oo Soo Jiitey 13 Quwadood Aduunka,Afrika oo Ka Qeylisay Quwadaha
XOG saldhiga Turkiga ee Soomaliya oo Soo Jiitey 13 Quwadood Aduunka,Afrika oo Ka Qeylisay Quwadaha
September 16, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 0
Wararkii ugu dambeeyay ee ay qoreen warbaahinta ayaa sheegaya in Ciidan qarsoodi ah oo ka tirsan milatariga Kenya ay mas’uul ka yihiin dilka tuhmanayaasha argagixisada ee weerarada habeenkii. Warbixinnada waxay ku saleysan yihiin wareysiyo lala yeeshay saraakiisha diblomaasiyadda iyo sirdoonka Mareykanka iyo Kenya.
Kooxda waxaa tababbaray, saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo Ingiriiska.
Waxaa lagu soo warramay in ilaa 2004, barnaamij ka socda Xarunta Sirdoonka ee CIA-da ay ka shaqeyneyso Kenya ,Waxaana Weheliya Sirdoonka Ingiriiska (MI6) Kuwaasi oo door muhiim ah ka ciyaaray aqoonsiga, Iyo raadinta Kuwa Looga Shakiyo Argagixisada
Tani waxay soo jiidatay xaqiiqda hawlgalada amni ee shisheeyaha ee ku baahsan ee Afrika.
Dhowr dowladood oo Afrikaan ah ayaa marti gelinaya saldhigyo milatari oo shisheeye.
Arrintan ayaa jirta inkastoo Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika (AU) uu ka walaacsan yahay kordhinta xarumaha militariga shisheeye ee qaaradda.
Midowga Afrika wuxuu sidoo kale ka walwalsan yahay awood la’aanta inuu la socdo dhaq dhaqaaqa hubka iyo saldhigyadan militari Quwadaha., heshiisyo laba geesood ah oo u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika iyo quwadaha shisheeye ayaa hoosta ka xariiqaya Tartanka ciidamada millatariga shisheeye ee qaaradda oo dhan.
Ugu yaraan 13 quwadaha shisheeyaha ah ayaa joogitaan milateri ku leh qaaradda. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa safka hore kaga jira howlgalada laga fulinayo dhulka Afrika.
Intaa waxaa sii dheer, kooxo milatari oo gaar loo leeyahay ayaa ka hawl gala aagag dhowr ah oo isku dhacu ka jiro ciida Afrika. Waqooyiga Mozambique ayaa ah Halka ugu dambeeysey
Dhaqdhaqaaqyadan waxay ku soo beegmayaan,Iyadoo Ay Jirtey sheegashooyinka ah in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ee MiG-29 iyo Su-24 ay hadda hawlgallo ka sameeyeen Liibiya iyagoo taageeraya xoogagga millatariga ee sida gaarka ah u taageera Kremlin-ka si loo ballaariyo saameynta Moscow ee Afrika.
Khariidaynta saldhig militari
Waqtigaan la joogo, Mareykanku wuxuu leeyahay 7,000 oo ciidan milatari ah oo ku sugan Afrika. Ciidammadan waxay si wadajir ah ula fuliyaan howlgallo ay ciidamada Afrikaanka ah kula dagaallamaan xag-jiriinta .
Waxaa lagu martigaliyay xeryaha militariga ee qaaradda oo dhan, sida Uganda, South Sudan, Senegal, Niger, Gabon, Cameroon, Burkina Faso iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.Soomaaliya Iyo Jabuuti.
Intaa waxaa dheer, 2,000 oo askari oo Mareykan ah ayaa ka qeyb qaadanaya howlo tababar oo ka socda 40 dal oo Afrikaan ah. Ciidamada gaarka ah ee Mareykanka waxay ka howlgalaan bariga Afrika oo dhan Sida Kenya iyo Soomaaliya.
Si Lamid Ah Mareykanka, Faransiisku wuxuu geeyay ciidamo milatari , wuxuu saldhigyo ka sameystay dalal badan oo Afrikaan ah. Faransiiska wuxuu leeyahay in kabadan 7,500 oo ciidan milatari ah oo hada ka shaqeeya qaarada. Joogitaankeeda ugu weyni ee Faransiiska wuxuu ku Leeyahay Sahel, gaar ahaan , xadka ee isku xidha Mali, Burkina Faso iyo Niger.
Joogitaanka ciidamada militariga shisheeye ee Afrika kuma koobna awoodaha reer galbeedka. Shiinaha wuxuu Door Weyn Ku Leeyahay joogitaankiisa milatari ee Geeska Afrika . Waxayna Chiinaha Kordhisey Joogitaankeeda Qaarada tan iyo sanadkii 2008 markii ay ka qeyb qaadatay howlgalka caalamiga ah ee la dagaalanka burcad badeedda ee ka socda Gacanka Cadmeed.
Tan iyo waagaas Shiinaha ayaa Xoojiyey joogitaanka maraakiibta la dagaalanka burcad badeeda Geeska Afrika iyo Gacanka Cadmeed. Intii u dhaxeysay 2008 iyo 2018, Ciidamada Badda ee Shiinaha waxay howl geliyeen 26,000 oo ciidan milatari ah oo ku sugnaa howlo kala duwan oo amniga badda ah.
Sanadkii 2017, Shiinaha wuxuu ka furay Jabuuti saldhig milatari markii ugu horreysay . Tani waxay timid ka dib markii Mareykanku ka hirgeliyay Saldhigyadiisa Djibouti 2003 Lemonnier .
Lemonnier waxaa lala aasaasay saldhigyada Faransiiska, Talyaaniga, Ispain, Jarmalka iyo Jabbaan. Shiinaha ayaa Kadib Dhistay saldhig militari oo 36-hektar ah si ay u martigaliso dhowr kun oo ciidamada Shiinaha ah isla markaana ay u hesho tas-hiilaad maraakiibta, diyaaradaha.
Saldhigga Milateri ee Shiinaha ku leeyahay Jabuuti waxaa loo aasaasay in lagu taageero shan goobood oo ay ka hawlgalayaan . Waxaana Ka mid Ah ,Ladagaalanka burcad badeeda gacanka Cadan; ururinta sirdoonka ee wadamada kale; daadgureyn Ciidanka Shiinaha ee Bariga Afrika; hawlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ee askarta Shiinaha la geeyo; iyo howlgalada la dagaalanka argagixisada.
Hindiya waa waddan kale oo Aasiya ah oo kordhiyay joogitaankooda ciidamada badda ee Afrika. Waddanku wuxuu aasaasay shabakad xarumo militari oo ku teedsan Badweynta Hindiya si looga hortago raadadka militariga Shiinaha ee ku sii kordhaya gobolka.
Hindiya Waxay sidoo kale dooneysaa inay ka ilaaliso burcad badeeda marinkeeda ganacsiga.
Hindiya waxay leedahay hawlgallo joogto ah oo kormeeraya Geeska Afrika iyo Madagascar. Waddanku wuxuu kaloo qorsheynayaa inuu abuuro 32 xarumood oo laga hago radar ku yaal Seychelles.
Marka laga hadlayo Bariga Dhexe, Turkiga iyo Imaaraatka Carabta (UAE) waa labada dal ee sida muuqata joogitaan ciidan uga jooga Afrika.
Turkiga wuxuu ku soo biiray howlgalka caalamiga ah ee la dagaalanka burcad badeedda ee ka jirta xeebta Soomaaliya sanadkii 2009. Sanadkii 2017, waxay xarun militari ka furatay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Ujeedada ayaa ah in la tababaro askarta loo qorayo Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed. Turkiga ayaa sidoo kale taageeri doona ciidamada badda iyo kuwa ilaalada xeebaha Soomaaliya.
Imaaraadku wuxuu saldhig milatari ku lahaa dalka Ereteriya tan iyo sanadkii 2015. Waxay ka kooban tahay garoon diyaaradeed oo militari iyo dekedda. Saldhiga ayaa loo adeegsaday howlgalada ka dhanka ah xoogaga mucaaradka ee Yemen.
Afrika oo Ka Qeylisay militariga shisheeye
Way cadahay in Geeska Afrika xudun u yahay dhaqdhaqaaqa militari shisheeye.Ciidamo ajnabi ah ayaa halkaa la geeyay si ay uga hortagaan khataraha nabada adduunka, Ka Hortaga kooxaha argagixisada iyo budhcad badeedda, isla markaana ay u taageeraan qorshayaasha amniga ajaanibta.
Laakiin waxaa jira dhiirigelin kale oo lagu doonayo in saldhigyo milatari looga sameeyo Afrika. Kuwaas waxaa ka mid ah ilaalinta danaha ganacsiga, la jaanqaadidda maamullada saaxiibtinimada leh, iyo muujinta xukunka qaaradda oo diiradda saareysa kor u qaadista tartamada adduunka.
Dabcan, Afrika maahan mid ka reeban. Tusaale ahaan Mareykanka wuxuu sidoo kale joogitaan ciidan iyo amni oo aad u badan oo ku Leeyahay gobolka Khaliijka. Waxay xarumo ku leedahay dalal ay ka mid yihiin Baxreyn, Kuweyt, Qatar iyo Imaaraadka.
Dadka indha indheeya qaarkood waxay umuuqataa in dowlado shisheeye ay militarigooda kusoo rogayaan Afrika, laakiin, xaqiiqda, dowlado badan oo Afrikaan ah ayaa jecel inay martigaliyaan .
Heshiisyada laba geesoodka ah ee lala galo quwadaha waaweyn ayaa dakhli u abuura dawladaha Afrika. Furitaanka saldhiga milatari ee Shiinaha ka furtay Jabuuti ayaa tusaale u ah. Inta badan dhaqaalaha Jabuuti wuxuu ku tiirsan yahay amaahda Shiinaha .
Joogitaanka ciidamada milatariga shisheeye waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaartay la dagaalanka kooxaha argagixisada . Kuwaas waxaa ka mid ah kooxaha Ka Dagaalama Soomaaliya ee Bariga Afrika iyo Mali. Tani waxay sharraxaysaa sababta dalal badan oo Afrikaan ahi ay diyaar ugu yihiin inay u jeestaan ​​dawladaha shisheeye si ay uga helaan talo, sirdoon iyo taageero .
ciidamada shisheeye ee qaaradda. Tusaale ahaan, amniga Afrika waxaa buux dhaafiyay tiro badan oo amniga ajaanibta ah iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan.
Midowga Afrika Ayaa Ka Qeyliyey Inay Ciidanka Shisheeyaha Qaarada Muujinayaan Nabad La’aan Iyo Inaysan Qaarada Lahayn Ciidan Nabad Galyo,Taasi oo Mugdi Galinaysa Qaarada Horumarkeeda.
Midowga Afrika waxaa kale oo uu Ka walaac san yahay In tartanka Quwadaha Shisheeyaha Keeni karo isku Dhac,Xili Aysan Jirin Heshiis kala Xadaynaya Quwadahaasi.
Saamaynta ay ku leedahay Afrika iyo Badweynta Hindiya waxay gogol dhaaftay Xiisadaha Aasiya Sida Jabbaan iyo Hindi siyaasad ahaan iyo ammaan ahaanba . lahaanshaha Awooda Weyn ee Shiinaha ayaa caqabad ku noqon kara la macaamilkooda qaaradda ee Kale.
Ugu dambeyntiina, Wadamada Afrika ayaan la isku afgaran sida loo jaangooyo amniga iyo howlaha shisheeye.
In kasta oo awoodda nabad ilaalineed ee Afrika ay si weyn kor ugu kacday, haddana Midowga Afrika wuxuu weli aad ugu tiirsan yahay maalgalinta iyo ilaha dibadda ee hawlgallada nabad ilaalinta. Ma haysato xorriyad ay ku qaadato go’aanno istiraatiijiyadeed oo madax-bannaan, hawlgal iyo xitaa taatiko ah hawlgalladeeda.
Ilaa iyo inta cilladahaasi ka jiraan jawaabta Afrika ee iskahorimaadyada hubeysan , militariga shisheeye iyo adeegyada sirdoonka ayaa sii wadi doona inay ka howlgalaan qaaradda.
Kuwani waa arrimo ay tahay in wax laga qabto ka hor inta dawladaha Afrika aysan dheg u dhigin walaaca Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika ee ku saabsan faragelinta milatari ee shisheeyaha ee qaaradda.